Kooxaha Argagixisada ah ee ay Eritrea Hoyga Siiso oo Ugaadhsanaya Beesha Ogadeen – Rasaasa News
Feb 15, 2011 alshabaab, Argagixisada ah ee ay Eritrea Hoyga Siiso oo Ugaadhsanaya Beesha Ogadeen, Jwxo-shiil, kooxda, Somaliya
Waxaa maalintii shalay ahayd Feb 14, 2011 magaalada Garrissa, ee Degaanka Somalida Kenya lagu dilay Sheekh Maxamed Dubad Xirsi, oo ahaa sheekh si weyn looga yaqaanay Kenya, laakiin ka soojeeday gabalka Qoraxey ee degaanka Somalida Itobiya. Sheekhu Maxamed wuxuu ka tirsanaan jiray ururka Somali galbeed, wuxuuna ahaa dadka sida aadka ah ugu ololeeya nabada jecelnaa in ay nabadi ka dhacdo degaanka Somalida Itobiya.
Sheekh Maxamed Dubad haatan wuxuu ahaa gudoomiyaha Jaaliyada Degaanka Somalida Itobiya ee degan dalka Kenya, mar dhaw ayuuna ka soo laabtay magaalada Jijiga.
Dilka Sheekh Maxamed ee shalay ayaa la aaminsan yahay in uu ka dambeeyo Maxamed Cumar Cismaan [Jwxo-shiil], oo isagu madax u ah koox yar oo nabad diid ah oo ay Eritrea iyo argagixisada Somaliya ee Alshabaab ku adeegataan.
Jwxo-shiil, oo degan dalka Ingriiska kana qaata lacagta la siiyo dadka gaboobay [pension] ee canshuurta dadka shaqeeya ka timaada, ayaa waxaa saldhig u ah Eritrea oo uu ka hago koox argagixiso ah. Dhawaan ayey ahayd kolkii isaga iyo saraakiil Eritrean ah ay tageen magaalada dekada ah ee Kismayo oo ay kula kulmeen madaxda ururka Alshabaab.
Maxamed Cumar Cisman [jwxo-shiil], oo burburiyey Jabahii ONLF, ayaa sanooyinkii ugu dambeeyay waxaa uu noqday mushkilada ugu weyn ee haysata dadka Ogadeenka ah. Jwxo-shiil, waxaa uu si qarsoon u laayaa wax garadka iyo dadka aqoonta leh ee Ogadeenka ah, isaga oo kaashanaya argagixisada uu ka midka yahay. Dadka uu bar timaameedsado waxaa weeye hogaamiyeyaasha dadweynah ee iyagu si cad u sheega dhibaatooyinka uu Janan Jwxo-shiil, u gaysanayo dadweynaha ku nool gabalka Ogadeen.
In ka yar laba bilood gudahood, waxay meelo kala duwan oo mid ah dalka Kenya iyo Itobiya ay argagixisadu ku dishay masuuliyiin iyo ganacsato u dhalatay degaanka Somalida Itobiya, kuwaas oo qaarkood ay ahaayeen dad ka qayb galay heshiiskii nabad ee ka dhacay dalka Itobiya oo ay saxiixeen Jabhadaha ONLF iyo Somali Galbeed.
Heshiikii nabada ee ay Jabhada Somali Galbeed la gaadhay dawlada Itobiya, waxaa taageerada ugu badan ay ka timid ganacsatada iyo culimada diinta. Waxaana si weyn uga cadhooday heshiiska nabada kooxaha argagixisada ah ee geeska Afrika, gaar ahaana kooxda Jwxo-shiil, oo iyagu u arkayey in heshiisku uu ka horimanayo danahooda gaarka ah.
Kooxda Jwxo-shiil, maalmo ka dib heshiiskii nabad waxay xubnahoodu e-mailo isugu direen in cadowgooda ugu weyn uu yahay ganacsatada iyo culimada diinta u dhalatay degaanka Somalida Itobiya, gaar ahaana kuwa degan dalka Kenya.
Heshiiskii nabada ka in yar ka dib, waxaa la dilay Cabdulahi Dheere oo ahaa ganacsade degan Kenya, kana soo jeeda gabalka Fiiq ee degaanka Somalida Itobiya. Cabdulahi waxaa la sheegay in uu ku dhintay shil gaadhi, laakiin Cabdilahi dheere xabad baa lagu dhuftay intaan gaadhiga la dul marin ka hore. Kolkii uu gaadhigii Cabdulahi jidka ka baxay isaga oo mayd ah waxaa la dul mariyey gaadhiweyn oo xamuul ah. Booliska Kenya waxay ilaa iyo maanta doon doonayaan saddex nin oo la socotay gaadhiga la dul mariyey Cabdulahi Dheere.
Dilkii 2aad ee ay gaysato kooxda argagixisada ah, waxaa uu ka dhacay magaalada Qabridahare oo xili habeen ah lagu dilay Maxamed Biniin, isaga oo gurigiisa la jooga caruurtiisa iyo xaaskiisa.
Waxaa xigay dilkii 3aad ee Kamas Dhabar oo ka dhacay xerada Qaxootiga ee IFO, Kamas ayaa isagu hore u taageersanaa jiray Jwxo-shiil, baryahan dambase uu mad madow soo kala dhex galay. Sida la sheegay Kamas waxaa laga jaray lacag Eritrea looga soo diri jiray, wuxuuna waydiiyey sababta loo jaray, waxaana lagu yidhi Eritrea way yaraysay lacagihii ay ina siin jirtay, laakiin Jwxo-shiil, kuwa uu adeerka u yahay waxba lagama jarin caruurtana waa loo biilaa.
Kamas, waxaa laga sheegay in uu yidhi “sida aad wax u wado socon mayso.” Kolkii la dilayey Kamas waxaa maaweelinayey nin uu Adeer u yahay Jwxo-shiil, dabadeedna hakaday kolkii telefoon wargalina loo soo diray.
Dableyda dishay Kamas way madaxa ayey soo duubteen. Kooxda Jwxo-shiil, waxay sheegeen “in dilka Kamas ay ka dambeeyeen sirdoonka Itobiya.”
Dilkii 4aad ayaa shalay ka dhacay Garrissa, oo loo gaystay Sheekh Maxamed Dubad, waxaana lagu hor toogtay caruurtiisa iyo xaaskiisa xili habeen ah, waxaana toogtay dad u labisan sida kuwii Kamas dilay.
Kooxda argagixisada ah ee Jwxo-shiil, waxay sheegeen hadana in dilka Sheekh Maxamed Dubad ay ka dambaysay dad ay soo direen kooxda argagixisada ee Alshababa.
Waxaa isweydiin leh in Kamas ay Itobiya madax u soo duubatay oo ay dishay, Sheekh Maxamed Dubadna ay madaxa u soo duubteen Alshabaab oo ay dileen.
Waxaa dhab ah in kooxda Alshabaab iyo kooxda Jwxo-shiil, ay ku kala duwan yihiin oo kaliya; in Alshabaab ay layso dadka Jamhuuriyada Somaliya, kooxda Jwxo-shiilna ay layso dadka Ogaadeenka ah oo kaliya.
Labadoodabana waxaa soo amra oo falalka ay fulinyaan u sheega xukuumada argagixisada ah ee Eritrea.
Xuska Dhalashada Nabi Muxamed Naxariis iyo Nabad Galiyo korkiisa ha Ahaatee, oo Lagu Qabtay Addis Ababa.